जर्मनीको कीर्तिमानी छनौट यात्रा - खेलकुद - साप्ताहिक
जर्मनीको कीर्तिमानी छनौट यात्रा
केही अघिसम्म विश्वकपको डिफेन्डिङ च्याम्पियन छनौट चरणबाट गुज्रिन आवश्यक थिएन, स्वत: छनौट हुने नियम थियो । अहिले यो नियम फेरिएको छ र यसै कारण पछिल्लो विश्वकपको विजेता जर्मनीले पनि छनौट चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको थियो । सन् २०१४ मा ब्राजिलमा सम्पन्न विश्वकपको फाइनलमा जर्मनी अर्जेन्टिनालाई हराएर विजयी भएको थियो । उक्त जितसँगै उसले सिद्ध गरेको थियो, जर्मनी विश्व फुटबलमा सर्वाधिक सफल देशमध्ये एक हो ।
जर्मन फुटबल वास्तवमै कति बलियो छ ? यसको उत्तर उसले तय गरेको छनौट यात्राबाट समेत प्रस्ट हुन्छ । भलै घरेलु फुटबलमा जर्मनी स्पेनको ला लिगा तथा इंग्ल्यान्डको प्रिमियर लिग भन्दा पछाडि छ, तर बुंडेसलिगाको आधार बलियो मानिन्छ र त्यसकै परिणाम हो, जर्मन राष्ट्रिय टिमको लगातार राम्रो प्रदर्शन । एक वर्षपछि रुसमा हुने विश्वकपका लागि सञ्चालित युरोपेली छनौटमा जर्मनी समूह ‘सी’ मा थियो र पूरा छनौट यात्रामा जर्मनीले गज्जबको प्रदर्शन गर्‍यो ।
यो समूहका अरु टिम थिए, उत्तरी आयरल्यान्ड, चेक गणतन्त्र, नर्वे, अजरबैजान तथा सान मारिनो । यो समूहका कुनै पनि टिमले जर्मनीलाई बलियो चुनौती दिन सकेनन् । नतिजा, जर्मनीले छनौटमा खेलेका १० मध्ये सबै खेल जितेको थियो, जुन आफैमा कीर्तिमान हो । यस्तोमा जर्मनीले दस खेलबाट ३० अंक जोड्यो । समूहमा उत्तरी आयरल्यान्ड दोस्रो स्थानमा रह्यो र उसले बटुलेको थियो, १९ अंक । पहिलो र दोस्रो हुनेबीचको अन्तर ११ अंक ।
यसले पनि देखाउँछ, जर्मनीले छनौटमा कसरी खेल्यो ? छनौट खेलमा जर्मनीले कीर्तिमान ४३ गोल गरेको थियो । विपक्षी टिमले जर्मनीमाथि केवल ४ गोल मात्र गर्न सके । युरोपमा कुनै टिमले छनौटको सबै खेल जितेको यो दोस्रो अवसर हो । यसअघि स्पेनले सन् २०१० को विश्वकप छनौटमा यस्तै उपलब्धि हात पारेको थियो । त्यति बेला स्पेन बलियो टिम थियो र पछि उसले विश्वकप नै जित्यो, अहिले जर्मनी त्यस्तै स्थितिमा छ ।
जर्मन टिमका प्रशिक्षक हुन्, जोचिम लो । उनकै नेतृत्वमा जर्मनीले पछिल्लो विश्वकप जितेको थियो । प्रशिक्षकका रूपमा लोको आगमनपछि जर्मनीले लगातार राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म जर्मनीले लोको नेतृत्वमा जति पनि ठूला प्रतियोगिता खेलेको छ, प्रत्येकमा कम्तीमा सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको छ । यस्तोमा रुसमा पनि जर्मनीले उत्तिकै अब्बल दर्जाको फुटबल खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लो स्वयं भने के मान्छन् भने– रुसमा विश्वकप खेल्दा छनौटको प्रदर्शनले अर्थ राख्दैन् ।
‘जर्मनीले आउने विश्वकपमा उपाधिको रक्षा गर्न निकै कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ,’ लो भन्छन् ।
उनी छनौटमा प्राप्त सफलताबाट घमन्डी बन्न चाहँदैनन् । यी सबै स्थितिमा जर्मन फुटबलका सम्बन्धमा पूर्व इंग्लिस फुटबलर ग्यारी लिनेकरको भनाइ दोहोर्‍याउनु उचित हुन्छ । लिनेकर भन्थे— फुटबल सामान्य खेल हो, यसमा दुवै टिमका गरेर २२ खेलाडी मैदानमा हुन्छन् । उनीहरू ९० मिनेट एउटै बलका पछाडि लाग्छन् र अन्त्यमा जित हुन्छ, जर्मनीको ।
प्रकाशित :कार्तिक २८, २०७४
सकियो शत्रु गतेको मोफसल यात्रा
साइवर बहसमा बुद्ध वचन किर्तिमान्
सांगीतिक यात्राको सिल्भर जुब्ली
सुनकोसी कला यात्रा
हुर्रेको प्रचार यात्रा पोखराबाट
ग्रासरुट क्रिकेट सिकाउँदै स्टिभ माघ १, २०७५
असहाय बालकहरूको सहयोगमा सहारा पुस ३०, २०७५
फिक्का लिगको तीतो सत्य पुस २८, २०७५
मनाङ फेरि च्याम्पियन पुस २२, २०७५
विश्वकप फुटबलको वर्ष पुस १४, २०७५
रोकिने छैनन् शक्ति पुस ८, २०७५
प्याराग्लाइडिङको रौनक पुस ५, २०७५
अर्जेन्टिनी गुस्ताभोलाई हराउँदै प्रविन हङ्कङ च्याम्पियन पुस ४, २०७५
एभरेस्ट प्रिमियर लिगका सबैभन्दा महँगा खेलाडी पुस ३, २०७५
टिम मालिक हुनुको अर्थ पुस ३, २०७५